Tsy hita ao amin'ny Apple Store | intsony ireo mpihazona Hermés AirTag Avy amin'ny mac aho
Hatramin'ny nanombohan'ny Apple Watch, ny taranaka voalohany dia niara-niasa akaiky tamin'ny orinasa lafo vidy Hermès, fandefasana fehin-kibo vita amin'ny hoditra tena izy izay ny mpanankarena indrindra ihany no afaka mividy.
Tamin'ny fanombohan'ny AirTags, nivelatra ity fiaraha-miasa ity ary Apple dia manome andiana kojakoja ho an'ny jiro misy azy avy amin'ity mpanamboatra ity. Nefa indray alina tsy misy intsony ireo, raha tsy nanapaka momba ny antony momba ny antony i Apple na i Hermès.
Ny tsipika Apple's Hermès AirTags dia misy fomba telo miavaka:
AirTag Hermés Keychain misy amin'ny loko Orange, Bleu Indigo ary Fauve ary miakatra hatramin'ny 349 euro ny vidiny. Tsy misy ny fandefasana an'ity maodely ity, noho izany tsy azonay ampiana amin'ny baolina hividianana azy amin'ny Internet.
Colgate ho an'ny kitapo Hermès AirTag, misy amin'ny Orange, Bleu Indigo ary Fauve (mitovy loko amin'ny keychain), dia mitentina 299 euro. Tsy misy afa-tsy amin'ny loko Fauve halefa amin'ny faran'ny volana Jona.
Famaritana valizy AirTag Hermès Fauve, tsy misy afa-tsy amin'ity loko ity, manana vidiny 449 euro, ary tsy azo vidiana amin'ny Internet.
Ireo vokatra telo ireo asio AirTag sokitra manokana miaraka amin'ilay sary famantarana Clou de Selle.
Ny antony tsy fahazoana ny elanelan'ny Hermès AirTag dia tsy fantatra, fa filazan'ny sasany amin'ny haino aman-jery izay mety noho ny olana kalitao sasany amin'ireo vokatra ireo.
Ireo AirTags manokana ireo dia azo jerena ao amin'ny tranokala Hermès ihany koa, saingy, toy ny ao amin'ny Apple Store, tsy misy ny tahiry. Ny mazava dia ny antony nisy fiatraikany tamin'ny fisian'ireto AirTags manokana ireto Mitovy io ary mety tsy hihaona amin'izy ireo mihitsy isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Tsy hita ao amin'ny Apple Store intsony ireo mpihazona Hermés AirTag